Rubric: Mabhuku uye kunyora nyaya
Pfupiso ye "The American Tragedy" naTheodore Dreiser. Urongwa, iwo anonyanya kutaurwa, mafirimu anoenderana
Pfupiso ye "American Dambudziko" iri nyore kutaura, sezvo basa racho richizivikanwa nehurongwa hwaro hwakareruka. Nekudaro, kudzika kwezvinowanikwa nemunyori pahupenyu hwenharaunda yake yanhasi zvinoita kuti kudzokorora kwerudzi urwu kuve kwakaoma ...
"Tradesman mune mukurumbira", Moliere. Pfupiso yemutambo wacho
Saka, Moliere ari pachirongwa. "Tradesman mune mukurumbira" ibhuku rakanyorwa nemunyori pahwaro hwechokwadi uye hwakazara kesi. Mumiriri weTurkey, aive padare raLouis XIV, aive asina basa ...
Chii chinonzi liner uye chinodya ne chii?
Liner chinhu chisingaverengeki chinhu mune yeatambi yemuimbi wega wega. Ichi hachisi peni, kwete chaainzwa-chipi pendi kana bhurashi, asi anogona kudhirowa nemhando dzose nhatu. Ndiani anoida uye nei? ...
Hunhu hwengano ndihwo "Hwirudzidziso neGwayana". Kuongorora uye Zvemukati
Urongwa hwemabasa mazhinji ndehwekusingaperi. Vaive akakosha munguva dzekare, havana kurasa kukosha zvino. Izvi zvinosanganisira "Wolf neGwaiana". Kekutanga, iyo yekare chiGiriki fabulist Aesop akataura nezvavo. Gwayana rinotambura ...
"Republic of SKID": pfupiso. Chii chiri bhuku raG. Belykh uye L. Panteleev "Republic of ShKID"?
Iro basa "Republic of SKID" inotaurira nyaya yevana vanogara mune boarding chikoro chezvemagariro nedzidzo yevashandi, vakapihwa Dostoevsky. Asi vakomana vacho vakauya nezita ravo rezvedzidzo ino. Vanomuti Skida. Kolka the Thunderbolts All ...
Fable "Dhongi uye Nightingale": kukunda kwekusaziva
Mamiriro ezvinhu asina kunaka, apo kusaziva kunotorwa kuti atonge zvinhu, pfungwa nekuravira kwake hazvisi pasi, zvinosangana nevanogumburwa kazhinji. Nezve izvi - ngano "Dhongi uye Nightingale" naIvan Krylov. Conflict Contemporaries akati ...
Sergey Yesenin: “Melkoliesie. Steppe naDali
Basa reLyrical “Sango rakadzika. Steppe naDali ", mumiririri anodikanwa weNovokrestyansk nhetembo nhetembo S. A. Yesenin, nevazhinji, anoratidza zvakare rudo rusina mutsindo rweiyi chaiyo Russian mutongi kuenda kumusha kwake ...
Chekhov's pseudonyms pamatanho akasiyana ehupenyu hwake
Munguva yebasa rake rese rekuverenga, Anton Chekhov akashandisa pseudonyms. Uye yakanga yakasiyana zvachose "mazita echipiri". Uye kana iwe ukatarira kuchinyorwa, icho chinonyora mazita epseudonyms a Chekhov, haungawani iwo ...
Nhetembo - chii?
Nhetembo rwiyo rwemanzwiro anoratidzwa pabepa. Kwenguva yakareba, vanhu vakaedza kuratidza nerubatsiro rwavo zvese zvaiitika mumweya: kusuwa, mufaro, kusuwa, mufaro, uye zvechokwadi, ...
Andrei Malyshko - Chirusian chikwata, songwriter "Vchitelko Mine", "Psnya pro rushnyk" uye "Bіlі Kastani"
Pano pane nhetembo dzakadaro dzinopinda muchirangaridzo uye dzinogara mairi nokusingaperi. Chidembo chechiKraine Malyshko Andrei Samoilovich akanyora nhetembo dzakadaro. Kutanga kunyora pazera remakore gumi, akasika huru ...
Pfupiso: "Vakadzi veRussia", Nekrasov N. A.
N. A. Nekrasov - akakurumbira munyori weRussia, mudetembi uye paruzhinji. Akapa zvisikwa zvake kunyanya kuvanhuwo zvavo, matambudziko avo nezvavakaona. Aya mabasa akadai sa "Frost, Red Nose", "Ndiani ari pa ...
Zvinyorwa zvadzo zvishomanana zvichatibatsira kuti tifunge nhau dzedu dzinonakidzwa: "Kalif Stork", Gauf
Munguva yehupenyu hwake hupfupi, Gauf akanyora nhau dzakawanda dzakanaka uye dzomutsa. Vakawanda vavo vanoziva kwatiri kubva paudiki. Iko kuunganidza kunosanganisira, sekutonga, ivo vanozivikanwa zvikuru: "Little Muk", "Nhau ...
Nhaurirano yeIrid yaHomer: Kutaura Kwemhizha yeTrans War
Nhepfenyuro Homer's Iliad inhau yeimwe yezvinyorwa zvakakurumbira zveHerld War yakakurumbira. Nhoroondo yacho inotsanangura kutsamwa kweAchilles, pamwe nemigumisiro yaro yakaipa. The spat between Achilles and Agamemnon Tarisai ...
Mayakovsky. Kuongorora "Unogona here?" - chirevo chemubvunzo wake kana kumirira mhinduro yedu?
Zita racho rinonzwika mubvunzo. Kunyatsonzwisisa nhetembo "Uye iwe unogona?" (Mayakovsky), kuongorora kunotanga nemubvunzo uyu. Panguva imwecheteyo, inofananidzira uye yakananga, ichiratidza mhinduro. Kunyange, ...
Shary Anatoly: biography nemabasa ezvinonyadzisa mutori wenhau.
Shary Anatoly - Mutori wenhau weUukraine, vhidhiyo blogger. Akagamuchirwa zvakakwana nekuda kwezvakawanda zvinonyadzisa zvinyorwa uye kuongorora. Iye zvino anogara munharaunda yeEuropean Union. Anatoly Shary: biography Akaberekwa muKiev muna August 20 ...
Peter Davydov: nhoroondo yemunyori wenhetembo
Iwebhu yepasi rose inowanzopa vashandi vayo mukana wekushamiswa. Panguva ino, vanhu vanofarira uye mabhuku vaifanira kunge vashamiswa nekunyonganiswa kwakamuka pamusoro pezita raPeter Davydov. Kune rumwe rutivi, izvi ...
Analysis "Olesya" Kuprin: a story story with deep overtones
Kune mabasa asina kungoita chete, asiwo anodiwa kuverenga nekududzira, kuongorora, kupfuurira kuburikidza ivo pachavo. Rimwe rawo ndere nyaya "Olesya" inyorerwa mugore re1898 iri kure. Kutarira kwako - ...
Olga Bergolts: biography (muchidimbu)
Zita raOlga Bergholz rinozivikanwa kune vose vanogara munyika yedu yakakura, kunyanya Petersburgers. Mushure mezvose, haasi murondedzeri weRussia, iye chiratidzo cheupenyu chekuvharwa kweLeningrad. Zvakawanda zvaifanira kupfuura nemukadzi uyu akasimba. Her ...
Friedrich Schiller: biography, zvisikwa, pfungwa
Basa raFriedrich Schiller rakawira pane izvo zvinonzi nguva ye "Dutu uye kuparadza" - mazano mumutauro weGermany, uyo wairatidzirwa nekurambwa kweklassicism uye kuchinja kune rudo. Ino inofukidza ...
Yeuka boka rekare. "Musha" Bunin
Ivan Alekseevich Bunin munyori akakurumbira weRussia, mupiro weNobel Prize. Mumabasa ake, akaratidza kusuruvara kwemusha weRussia mushure mokuchinja kwezviitiko (1905), kusakanganiswa uye kurasikirwa kwehutsika hwehupenyu hwevanhu.
Mibvunzo ye53 mu database yakagadzirwa mu 0,787 masekondi.